Hụ Ahịa CRM - Nweta Ike nke Salesforce na 80% Na-efu Ọnụ
Anyị na-eji kuki iji melite ọrụ na arụmọrụ nke ndị ọrụ anyị. Gụọ anyị kuki Policy maka nkọwa ndị ọzọ. Nwetara ya
-edu ndú Management
Kedu ihe ị na-achọ?
Ịhazi na Ntuzi Na-eduba
Email Sync & Ndepụta,
Bido Ugbu a, Nwee Atụmatụ Mgbe e mesịrị
Gbalịa CompanyHub n'efu maka ụbọchị 14, yana atụmatụ niile. Enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ.
Gosi ọnụahịa na:
Kwụsị kwa afọ Ọnwa a kwụrụ
Ndị ọrụ 10 +? Nweta omenala omenala
$ 12 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.850 / onye ọrụ kwa ọnwa
Ejiri n'afọ ọ bụla (Chekwaa 33%)
$ 18 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.1275 / onye ọrụ kwa ọnwa
Ọnwa a kwụrụ
(Save 33% na atụmatụ atụmatụ kwa afọ)
2 - mmekọrịta email
Unlimited Email nsuso, ọbụna si Gmail
Chetara ma ọ bụrụ na ịzaghị azịza
Njikwa onye nwere ike ịhụ mpaghara
Jikọọ na 100 nke ngwa
Ebido wepụtara site na ebe nrụọrụ weebụ
$ 27 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.1925 / onye ọrụ kwa ọnwa
Nkọwapụta & Ntọala 20 +
Akụkọ omenala, ọbụna na mpaghara omenala
Ụdị chaatị dị iche iche
Ihe omuma nke data di elu
$ 24 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.1500 / onye ọrụ kwa ọnwa
$ 36 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.2484 / onye ọrụ kwa ọnwa
Megharia nhazi gi
Ejiri ihe ngosi / omume
Mgbanwe / omume
Mepụta echiche nke omenala (na-enweghị koodu ọ bụla!) Iji rụọ ọrụ ọ bụla azụmahịa
Email / alerts
Na-emepụta ihe / ọrụ ndị ọzọ
$ 33 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.2277 / onye ọrụ kwa ọnwa
$ 49 / onye ọrụ kwa ọnwa
Rs.3380 / onye ọrụ kwa ọnwa
Tebụl dị iche iche
Nhazi dị elu maka ụlọ ọrụ gị
Ngwa ngwa ọdịnala iji jikwaa usoro ndị ọzọ
Ịkọ akụkọ na akpaaka na tebụl dị iche iche
Mee ọkachamara na-achọ Quotes na 1 pịa
Ụlọ ahịa ahịa na Ngwaahịa
Ógbè Management / Iwu dabeere na nchọpụta vidiyo
Bido Ọnwale Ikpe Gị Ugbu a
Nyocha Free Day 14. Enweghị Kaadị E Si Nweta.
Ntak emi M Kwesịrị Họrọ CompanyHub?
Okpomume zuru oke maka ahia gị
CompanyHub bụ otu n'ime CRMs kachasị mma maka SMBs. Na mfe ịdọrọ-dobe ị nwere ike:
Hazie ubi, ogidi, nzacha wdg.
Soro ma hazie ihe ọ bụla na tebụl ndị dị ka ụgwọ, Usoro, Njirimara wdg.
Jikọọ ihe niile ma nweta nlele elekere 360.
Tụlee ihe ọ bụla na akụkọ
UTrons - Ghọtaa Ọchụ Ọrụ Gị na Dọrọ-Drop
UTrons CompanyHub nyere gị aka ịmepụta usoro ọ bụla site na ịmepụta chaatị. Dịka:
Mepụta ọrụ mgbe mgbanwe na-agbanwe
Na-emepụta ihe mgbe ị na-emepụta ụlọ ọrụ
Gbanwee mmemme na akpaghị aka
Na-ezipụ ozi ụbọchị ọmụmụ / usoro nke ozi / ncheta ụbọchị
Dị mfe ka Excel CRM
Team gị ga-eji ya
Excel dị ka anya nke na-enye gị ohere ime ọtụtụ n'ime ihe site na otu na ibe - mepụta ndu, dezie mkpụrụ ndụ, zipu ozi, tinye edemede / ọrụ / mkparịta ụka wdg.
Nchekwa - Nchịkwa zuru oke nke nwere ike
lee ihe data
Ị nwere ike ichikota onye nwere ike ịhụ ihe ndekọ na mpaghara.
Nkwado Nlekọta Ọhụụ
Edewo otu onye nkwado anyị 100% na G2Crowd n'ihi na anyị na-aga ozokwa iji nyere ndị ahịa anyị aka.
Nweta ike nke ụlọ ọrụ CRM na-enweghị mgbagwoju anya na ọnụ.
Ka Na-ajụ Ajụjụ?
Gịnị mere ị ga-eji zụta gị? Kedu ihe mere ị ji dị iche?
Anyị na-arụ ọrụ na CRM space maka 8 + afọ. Nke a nyere anyị nghọta nke mkpa nke ụlọ ọrụ dị iche. Anyị ejirila ọtụtụ CRM maka ìgwè ndị ahịa anyị. Nke a mere ka anyị ghọta na ọtụtụ CRM dị oke ma ọ bụ ju mgbagwoju anya. Ọzọkwa, ha enweghị ezigbo ngwá ahịa dịka ntanetị email, kọọ akụkọ wdg. N'ịbụ ndị iwe, anyị kpebiri iwuli onwe anyị. Dịka anyị na-echekwa ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịmepụta CRM dị mfe ma dị ike nke na enyere ụlọ ọrụ aka.
Kedu ihe ga-esi na nke a pụta?
Ụlọ ọrụ Company ga-enyere gị aka na 3 ụzọ. 1. Ị ga-enwe ike ịzụlite ndị na-eduzi gị ma gbanwee nduzi ndị ọzọ. Nke a na - etowanye ahịa gị. 2. Ọ ga-eme ka ụbụrụ gị na-arụ ọrụ. Ndị ọrụ gị nwere ike ịchekwa ọtụtụ awa ma jiri ya mee ka ị lekwasị anya n'ahịa. 3. Ị ga-enweta visibilụ zuru ezu. Ị ga-enwe ike iṅomi ihe niile na-eduga, mkparịta ụka ha, na-emekọ na ebe etiti. I nwekwara ike nyochaa ihe ọ bụla dị na akụkọ dị ike. Ya mere, i nweta ihe nile iji zụlite azụmahịa gị.
Enwere ndị nkwekọrịta ogologo oge?
Obi siri anyị ike na CompanyHub ga-ekwenye na ọ bara uru n'ime ụbọchị ole na ole. Ọ bụ ya mere na anyị anaghị edebe nkwekọrịta ọ bụla ogologo oge ma ị nwere ike ịpụ na atụmatụ ọnwa na ọnwa. Ị nwere ike howerver, kwụọ ụgwọ kwa afọ iji nweta ego ọzọ.
Kedu ihe gụnyere na oku ọzụzụ?
Na oku oku, otu n'ime ndị ọkachamara CRM ga-abịarute gị ma ha ga-aghọta ihe ị chọrọ. Mgbe ị ghọtara ihe ndị ha chọrọ, ha ga-eduzi gị iji nweta ihe kachasị mma na akaụntụ CompanyHub CRM gị. Ị ga-enweta ngosi dịka ọ bụla ị chọrọ. I nwekwara ike itinye aka n'òtù gị.
Kedu ka m ga-esi gosi nke a na ndị otu m?
Ị nwere ike ịkpọ òkù gị ozugbo na akaụntụ CompanyHub gị ka ha wee malite iji ya. CompanyHub dị mfe iji ma anyị mara mma na otu gị ga-amalite iji ụbọchị 1. Ma ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla, gị / ndị otu gị nwere ike ịbanye na otu ndị otu na-akwado anyị ma ha nwere ike ịduzi gị n'ihu.
Ị na-akwado GDPR?
Anyị maara na ọ bụ weebụ anụ ọhịa n'ebe ahụ ma anyị nwere mmasị na nhọrọ ndị ahịa anyị na-adabere na CompanyHub maka ozi ahịa ha niile. Isoro Ụlọ ọrụ a bụ zuru ezu GDPR.
Kedu ka data m dị?
Nche data bụ ihe anyị na-ewere nke ọma n'ebe a na CompanyHub. N'ezie anyị na-enye gị nchekwa 5 nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ: 1. Nwepu nchekwa data maka 2 onye ọ bụla. Ndobe data nyefee na-eji SSL dị ka anoghi n'ulo oba 3. Sava AWS, nke 4 na-eduzi. Nchekwa nchekwa nchekwa 5. Nchekwa ebe nchekwa.
Mgbe ị na-eziga nnukwu email nke adreesị ozi-e ga-eji?
N'adịghị ka ozi ịntanetị ahịa, anyị na-eji adreesị email gị na ihe nkesa gị zipu ozi ịntanetị dị ukwuu (otu n'otu). Ya mere, ohere nke ozi email ị na-abanye n'ime igbe mbata mbụ gị bụ nke ka elu.
Ego ole ka m nwere ike izipu iji CompanyHub?
Imirikiti ndị na-eweta email nwere oke ịgba kwa ụbọchị, nke kachasị na 100s. Biko lelee njedebe kwa ụbọchị nke onye na-ahụ maka izipu ozi. CompanyHub nyere 1000 kwa ụbọchị.
Ebee ka data m kwadoro?
Anyị na-eji sava AWS, nke ọtụtụ n'ime saịtị ndị na-eduga na-ejikwa.
Ndi a ga - emekota ya na usoro ndi ozo?
Site na nhọrọ dị iche iche dị ka Zapier, PieSync na API, CompanyHub nwere ike itinye aka na ngwa ngwa niile.
Kedu ihe siri ike iji malite na CompanyHub?
Iji CompanyHub dị mfe dị ka excel. Ihe niile ị ga - eme bụ ịmepụta akaụntụ gị ma malite. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ịchọta nkwado gị ahịa.
Kedu ihe bụ UTron na olee otu o si arụ ọrụ?
UTron bụ bot na-azụ ahịa nke onwe gị nke ga-enyere gị aka rụọ ọrụ niile na-agwụ ike. Site na isi ma pịa ị nwere ike ịmepụta UTrons gị iji mee ka ọ bụrụ ihe niile gbasara azụmahịa gị n'enweghị otu koodu.
Ụlọọrụ Company ọ ga - arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka m?
Anyị kwenyesiri ike na ọ bụ mobile-mbụ ụwa na anyị achọghị ka igbochi ahịa anyị na-ere na oche ha. Nke ahụ bụ ihe mere CompanyHub dị mfe anyị mobile ngwa ọdịnala maka gam akporo na iOS, nke e mere maka "mgbe niile na-aga" ahịa ndị ahịa. Ya mere, ihe niile ị chọrọ bụ naanị ịpịpụ.
Enwere m ntọala ụlọ ọrụ m na ebe dị iche iche, ọ bụ ọrụ a maka m?
Ee, CompanyHub ga-abụ ngwọta zuru oke maka gị ma ọ bụrụ na ị nwere nhazi ọrụ gị na ọnọdụ dị iche iche. Na CompanyHub ị nwere ike ikpebi onye onye ọrụ nwere ike ịhụ ozi. Ndị otu gị niile nwekwara ike imekọrịta ihe n'otu ebe mgbe ị nwetara nhụchacha zuru oke. Ị nwekwara ike ịmepụta akụkọ nwere nghọta n'ime nkeji ole na ole.
Ọ ga - enwe onye ma ọ bụrụ na anyị chọrọ enyemaka n'ịmepụta akaụntụ ahụ?
Ee, otu onye na-akwado anyị ga-abụ ozi naanị mgbe ọ bụla ị chọrọ ha. Mgbe ọ bụla gị ma ọ bụ ndị otu gị nwere obi abụọ ma ọ bụ gbara ajụjụ ọ bụla ozi / email anyị otu na ha ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka. BTW CompanyHub nkwado otu bụ ụlọ ọrụ naanị nwetara ụlọ ọrụ 100% maka afọ ojuju na G2 Crowd's High performance CRM Spring list.
Ngalaba Nkwado Anyị Na-ahụ Maka Enyemaka Ndị Ahịa Anyị
Ndị ahịa anyị egosipụtala ịhụnanya dị ukwuu Nyocha ha 100% Na G2Crowd!
Enyemaka na Ntọala Akaụntụ
Nmekere onwe ya
Were 15 na-agba ịnyịnya nke CompanyHub ma dị njikere inwe obi ụtọ
Ka anyi gbalịa Nyocha 14 Days n'efu. Enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ.
GDPR dị njikere
Ụlọ ọrụ ahịa
enweta ya naApp Store
Nweta yaGoogle Play
Copyright © 2018 CompanyHub. Ikike niile echekwabara.
Malite. Enweghị Mbido achọrọ.
A chọrọ aha
Tinye adreesị ozi-e dị irè
Site na ịbanye, ị kwetara na anyị amụma nzuzo na Usoro ojiji
Biko jupụta nkọwa iji nweta ọnụahịa
Oops! Njehie mere!